KDrama Archives - MoviesFan
ဒီလထဲမှာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်နေရတဲ့ Encounter ဇာတ်လမ်းတွဲ
ဒီနိုဝင်ဘာလထဲမှာတော့ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲသစ်တွေ တစ်ပုံကြီး ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်လို့ ဒီလက ကိုရီးယားပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ လတစ်လလို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးတွေထဲမှာမှ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို အဖမ်းစားနိုင်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ရှိလို့နေပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ Encounter လို့အမည်ရပါတယ်။
Encounter ဇာတ်လမ်းတွဲ အရမ်းနာမည်ကြီးနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Read More
KDrama, Korea, Romance, Series
ကိုရီးယားရုပ်သံဆုပေးပွဲမှာ ဆုပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Marry Me Now?
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့က Gyeongnam Culture & Art Center မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ ၁၁ ကြိမ်မြောက် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကြီးမှာ နာမည်ကျော် ဇာတ်လမ်းတွဲရှည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Marry Me Now? ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲက ဆုပေါင်းများစွာကို သိမ်းကြုံးရယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
နာမည်ကျော် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်သော KBS ရဲ့ Read More
Drama, KDrama, Korea, Romance
သမီးလေးကို အရမ်းသတိရနေတဲ့ Ji Sung
လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်ပြသနေဆဲဖြစ်သော Familiar Wife ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဝါရင့်ကိုရီးယားမင်းသားချော Ji Sung က သူရဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့် အချိန်မပေးဖြစ်တဲ့ သူ့သမီးလေးကို အရမ်းသတိရလွမ်းဆွတ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်သွားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ရရက်နေ့မှာ Ji Sung က သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Instagram ပေါ်မှာ သူ့သမီးလေးနဲ့ Read More
celebrity news, KDrama, Korea
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ် ရိုက်ကူးသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ Yoo In Na
အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် နုပျိုလှပနေတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးချောလေး Yoo In Na ကတော့ tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမယ့် It Feels Sincere ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက် ဆွေးနွေးနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော Yoo In Na အနေနဲ့ It Feels Sincere ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဝင်ရောက်ရိုက်ကူးသွားဖို့ စဉ်းစားနေပြီဖြစ်တယ်လို့ Read More
celebrity news, Drama, KDrama, Korea, Romance